TAFATSANGANA NY TAMBAZOTRAN’NY MPANAO GAZETY NAMAN’NY ANKIZY
Araka ny antontan’isa nivoaka tamin’ity taona 2011 ity dia eo amin’ny 43,1%-n’ny mponina eto Madagasikara dia zaza sy tanora latsaky ny 15 taona avokoa. Amin’ny ankapobeny anefa dia mahalana no mba ahitana lahatsoratra mikasika ireo sokajin-taona ireo eo amin’ny lohateny lehibe eo amin’ny pejy voalohany amin’ireo gazety maro mivoaka isan’andro eto Madagasikara.. Manoloana izany zava-misy izany indrindra dia nanokana andro iray nihaonana sy nifampidinihana tamin’ny mpanao gazety maro sy ry zareo avy ao amin’ny fiaraha-monim-pirenena, ny tompon’andraikitra ao amin’ny Unicef mba hiresahana sy hiadiana hevitra ary hitadiavana vahaolana mikasika ny famokarana vaovao momba ny ankizy. Teny amin’ny foiben-toeran’ny Unicef eny Andraharo no nanatanterahana izany ny Alakamisy 11 Aogositra teo.
Niainga tamin’ny fijerena ireo lohateny lehibe nivoaka an-gazety ny dinidinika. Gazety roa, mivoaka isan’andro, no nisintonana ireo lohateny lehibe mivoaka amin’ny pejy voalohany na “La Une”, tao anatin’ny volana Jona sy Jolay.
Tamin’ny ankapobeny dia ireo lohateny momba ny POLITIKA hatrany no tena nahazo vahana sy nomena lanja manokana hatrany.. Hita tamin’izany fa ny 80%-n’ireo lohanteny lehibe dia niompana tamin’ny POLITIKA avokoa. Ny 20% dia mikasika ny FIARAHA-MONINA sy ireo TRANGA ISAN-KARAZANY TETSY SY TEROA na Faits Divers (FD). O% kosa ny lohateny momba ny ANKIZY. Tsy nisy lohateny lehibe momba ny ankizy mihitsy na iray aza raha tsy lahatsoratra FD mahakasika ankizy ary mora handafosana gazety. Tsapa fa adino matetika ny tombontsoa ho an’ny ankizy fa ny lohateny Politika sy ireo vaovao manaitaitra ( herisetra, fanolanana zaza,..), no asongadina mba handafosana gazety betsaka.
Araka izany, dia nanapakevitra ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena, avy amin’ny alalan’ny Unicef fa hampitovy ny tadin-dokangany ary hiara-hiasa mba ho tombontsoa ho an’ny ankizy. Natsangana tamin’izany ary ny tambazotra iombonanan’ny roa tonta mba hiresahana bebe kokoa momba ny ankizy, izay antsoina hoe “tambazotran’ny mpanao gazety naman’ny ankizy”.
Anisan’ny asa ho sahanin’io tambazotra io ny hanamorana ny asan’ny mpanao gazety sy hanampy azy ireo amin’ny fanomezana vaovao momba ny ankizy, vaovao betsaka sady tsara ary marina. Hanampy ny mpanao gazety hanaraka ny lalan’ny fanoratana ihany koa ny fisian’io tambazotra io. Ankoatra izany dia afaka mikarakara fivoahana ivelany ho an’ny mpanao gazety ihany koa ny tambazotra mba hikarohana sy hitrandrahana ny zava-misy marina mikasika ny ankizy any amin’ny toerana lavitra ary hamokarana lahatsoratra lehibe mikasika ny zavatra hita
Manana andraikitra lehibe ny mpanao gazety eo amin’ny famoahana ireny lahatsoratra ireny. Tokony hieritreritra lalandava ny mpanao gazety mialoha ny hanoratana ary hanontany tena raha misy fiantraikany amin’ilay ankizy izay voateny anatin’ny lahatsoratra ny zavatra voasorany.
Araka izany, dia tsy tokony avoaka loatra ny sary na lahatsoratra mety hanohintohina ny fiainana n any ho avin’ny ankizy iray na dia mety heverin’ny tompon’ny gazety aza fa handafosana gazety maro. Tokony omena fahafahana malalaka kosa ny ankizy mba haneho ny heviny sy hilaza malalaka ny heviny any anatin’ireny gazety ireny na ao amin’ny fahitalavitra sy ny radio. Tsy tokony hisy fanambazana vola na zavatra hafa ho setriny anefa izany.
Ampahany tamin'ireo mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena nandray anjara tamin'ny fihaonana.
(Sary : Nanouh)